Global Voices teny Malagasy » I-Fan-Lin: Miditra ao anatin’ny fiarahamonina manerantany · Global Voices teny Malagasy » Print
I-Fan-Lin: Miditra ao anatin'ny fiarahamonina manerantany
Voadika ny 06 Jolay 2019 4:16 GMT 1	 · Mpanoratra I-Fan Lin Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Lahatsoratra voalohany
Tamin'ny taona 2004, nandalo fifidianana faran'izay nampiasa-saina indrindra hatramin'ny nanombohanay nifidy ny filohanay mivantana tamin'ny taona 1996 i Taiwan . Nianatra tany Boston aho tamin'izany fotoana izany. Taitra tamin'ny vaovao tamin'ny aterineto, nanontaniako ny namako raha misy afaka hanampiako azy ireo. Nasain'ny namako nifandray tamin'i Portnoy aho satria mety hahita asa ho ahy izy (mihomehy).
Nanoratra ny lahatsoratro voalohany aho tamin'ny taona 2007 rehefa niditra ho mpandray anjara tao amin'ny ekipan'ny fandikantenin'ny Global Voices. Nanoratra lahatsoratra momba an'i Taiwan ho an'ny Global Voices tsy tapaka aho nanomboka teo. Nanontany tena foana aho rehefa manoratra ireo lahatsoratra ireo hoe nahoana ny olona avy any amin'ny firenen-kafa no liana amin'izay zava-mitranga ao amin'ity nosy ity. Satria tsy mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana i Taiwan ary firenena latsaky ny 30 no nankatoa an'i Taiwan ho firenena mahaleotena, Mahatsapa mandrakariva izahay fa tsy mifandray amin'ny sisa hafa amin'izao tontolo izao.
Tany Budapest tamin'ny taona 2008 no vovonana GV natrehako voalohany. Nandritra io fivoriana io dia nisy olona nanatona ahy ary niteny hoe: ‘Tiako ny lahatsoratrao momba ny Matsu sy ny hetsika ara-kolontsaina hafa ao Taiwan.’ Fotoana mahagaga izany ; Resy lahatra aho fa mendrika hozaraina amin'ny olon-kafa (noho ny ekipa mpandika teny manerana izao tontolo izao) ny tantaranay . Ny miasa miaraka amin'ireo mpikambana hafa ato amin'ny Global Voices no nahafahako nahafantatra ny feo any amin'izao tontolo izao. Amin'ny fankasitrahana ny feo any an-toerana, gaga aho nahita fa mizara zavatra maro iraisana izahay: ny toe-draharaha sarotra atrehin'ny vahoaka indizeny, ny fanalàna an-kerisetra ny olona sy ny biby noho ny fandrosoana ara-toekarena, ny famehezan'ny governemanta sy ny orinasa ny fampitam-baovao, ny fikatsahana ny zo mitovy ho an'ny olona amin'ny maha-lahy na maha-vavy azy sy ny sata ara-tsosialy, sns.
Tsy fantatro anefa raha toa ka afaka mamadika an'izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa izahay, kanefa matoky aho fa afaka mankafy ny fiainana miaraka isika ary mifampianatra arakaraka ny hifandraisan'ny feo any an-toerana. Global Voices, arahabaina nahatratra ny faha 10 taonany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/06/141136/